Eyona reels ilungileyo yokuloba kunye neempawu zazo | Ngeentlanzi
Xa siyokuloba kubalulekile ukuba ne-reel ehambelana nohlobo lokuloba esiza kulwenza. Ukuqinisekisa impumelelo ekubambiseni iisampulu, kufuneka sazi ngokugqibeleleyo ukuba isebenza njani isondo lokuloba ngalo lonke ixesha. Yiyo le nto eyenza umahluko phakathi kosuku lokuloba olufanelekileyo kunye nenkcitho elungileyo yexesha. Iireels ziyaqhubeka ngokuqhubeka ukonyusa ukhuphiswano ngobuchule betekhnoloji. Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukukuchaza ezona reels zilungileyo zokuloba.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga neeleels zokuloba, le yiposti yakho.
1 Eyona reels ilungileyo yokuloba
1.1 IKastKing Sharky Baitfeeder III yokuLoba
1.2 IShimano Fishing Reel-iBeastmaster XS A.
1.3 Ubulungu bePenn II 7000
2 Iindidi zezinto zokuloba
3 Iindawo ezibalulekileyo zentsimbi yokuloba
2021 Amagqabantshintshi e ...
IMagreel Reel Combos ...
IKastKing Sharky Baitfeeder III yokuLoba
Uyilo lweReel ...
Lo mzekelo Enye yezona zixabisekileyo kuba zenzelwe ukunika umphumo omuhle kunye nexabiso elifikelelekayo. Singakhetha phakathi kobukhulu obahlukeneyo ngokuxhomekeke kuhlobo lokuloba esiza kulwenza. Luhlobo lwe reel efanelekileyo yamanzi amatsha kunye netyuwa. Ifezekisa imisebenzi esisiseko yomlo. Ikhusele iibhola zensimbi engenasici kwaye iigiya zichanekile ngendlela efanelekileyo. Ngale reel ungatsala umbheyisi ophilayo ngenxa yenkqubo yokuqokelela entsha.
Amandla ayo ayelungiselelwe ukumelana nokuchaswa okuchaswa ngumzekelo weekilos ezili-12. Ngokwendlela yoyilo, ungayifumana ngombala omnyama nobomvu kwaye unokutshintsha i-crank evumela ukusebenza okukhulu. Ungayithenga le reel ngokuchofoza apha.
IShimano Fishing Reel-iBeastmaster XS A.
UShimano Beast Master ...
Olu phawu lungumlinganiso kwii reels zokuloba. Uneentlobo ngeentlobo zeemodeli onokukhetha kuzo. Olu hlobo ludibanisa ukugqibelela kwixabiso lemali elikhangelelwa kakhulu ngabalobi beamateur. Iqhelana nembono yeendlela ezahlukeneyo zokuloba. Inokumelana okuphezulu, ukukhanya kunye nokuguquguquka okuhle. Ezi zinto ziya kukunceda uhlalutye ixesha elide. Kubonakalisiwe ukuphosa ukuloba emanzini anetyuwa, kodwa ikwabonelela ngeziphumo ezilungileyo kwimilambo nakwimigxobhozo. Impazamo kuphela yale modeli kukuba azizi nekhoyili yokubuyisela.
Ngombulelo kumkhosi we-braking owufakileyo, uya kuba nakho ukumelana neekopi ezifikelela kwi-15 kilos ezichasayo. Iibheringi zenziwe ngentsimbi engenasici. Ungayifumana ngemibala exubeneyo emnyama nephuzi. Ukuba uthanda ukulahla ukuloba ungathenga le reel ngokuchofoza apha.
Ubulungu bePenn II 7000
Ubumbano lwePenn II LC -...
Le reel iyasebenza kulo naluphi na uhlobo lokuloba, kodwa ngakumbi iluncedo ekulobeni i-cyprinid yolwandle olunzulu emanzini amatsha. Kungenxa yokuba inamandla amakhulu kunye nonyamezelo kule meko. Imodeli elula kakhulu, Inobunzima kuphela iigram ezingama-780 kwaye yenziwe ngegrafite enezipleyiti ezisecaleni. Inkqubo yayo yokuqhekeza ine-carbon fiber kwaye iyakwazi ukumelana nobukhulu beekopi ezifikelela kwi-12 kilos. Uhlobo oluthengayo luza ngaphandle kwekhoyili yokubuyisela. Kuyilo sifumana umbala omnyama njengoninzi kwaye i-crank yenziwe ngomthi.
Ukuba ungumlobi weentlanzi kwaye uyaqala ngoku, le reel yenye yezona ndlela zibalaseleyo. Yithenge apha.
Iindidi zezinto zokuloba
Xa kuthengwa igajethi kwezi sifumana izinto ezahlukeneyo kunye netekhnoloji eyenziwe ngayo. Iimpawu ezinkulu zifuna ukhuphiswano kunye nokuphucula amava abalobi. Ke ngoko, awungekhe uvumele izixhobo zakho zokuloba ziphelelwe lixesha. Enkosi kuluhlu lwezinto zokuloba esiza kukunika kamva Uyakwazi ukukhangela kwaye uthelekise iimpawu zale mveliso kwaye uyihambise kuhlobo lokuloba oza kulwenza.
Ngokwesiqhelo, umlobi ujonga ixabiso. Nangona kunjalo, kukho ezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo njengezinto ezenziwe ngazo, uyilo, ubunzima, njl. Kuxhomekeke kwimo yokuloba apho ugxunyekwe khona uya kudinga uhlobo lwendlela. Zimbini iintlobo eziphambili zokuloba: uhlobo olujikelezayo kunye nohlobo lokuphosa. Iisondo ezijikelezayo zezona zicetyiswayo kwabo bafuna ukuqala kulo mdlalo. Ukubekwa kwale reel kwenziwa kwindawo esezantsi yentonga. Intshukumo inokwenziwa phezulu okanye ezantsi ukwenza ukubekwa ngokuchanekileyo komgca we-reel.
Ezi modeli zihlala zinamandla angaphantsi kunezo ziphosakeleyo. Zingcono ukuzisebenzisa emanzini azolileyo njengalawo eminye yemilambo. Kwelinye icala, sinesixhobo sokuphosa esaziwa njengegubu okanye esijikelezayo. Yeyona isetyenziselwa ukuloba nzulu elwandle elunxwemeni. Kolu hlobo lokuloba intonga iyaphoswa ishiywe ukuba iphumle emva koko iqokelele iintlanzi. Ngamanye amaxesha kuya kufuneka ulwe namandla oxhathiso enza ukuba ubambeke.
Kukho nezinye iintlobo zeemaski ezinje Ukunyathelwa kusetyenziswa ukuloba ngephenyane.
Iindawo ezibalulekileyo zentsimbi yokuloba
Ukwahlula olunye uhlobo lwe-reel kolunye, kuya kufuneka ujonge ezinye iinkalo kunye nezinto eziya kwahluka. Ezinye zazo ziyi-ratio, amandla ekhoyili, ubungakanani kunye nokuqhekeza. Umyinge ngowamanyathelo okukhawulezisa ukubuyisa umlobothi wakho. Ngokusebenzisa ifomula yemathematics, kunokwenzeka ukulinganisa amaxesha e-reel spins kunye nenani lokujika elinokunikwa i-crank. Umthamo wekhoyili ulinganiswa nge-mm. I-brake yiyo eya kuthi isincede ukuze umgca ungaphuli xa oko kuqala ukubonelela ngokuxhathisa xa sele kukhotyokisiwe. Iziqhoboshi asinakuzifumana ngaphambili nangasemva ivili lokuqhuba.
Kuxhomekeke kubungakanani be reel, inokuba namandla angaphezulu okanye amancinci. Iireels ezincinci zisetyenziselwa ukuloba ngentambo elula kunye neereels ezinkulu kwezinye iintlobo zokuloba ngephenyane.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso unokukhetha phakathi kweyona reels ilungileyo yokuloba eyona ilungele imodeli yakho yokuloba kunye namandla akho okuloba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Eyona reels ilungileyo yokuloba